Xuzhou Dinghua Construction Makiinado Co., Ltd. waa mid ka mid ah kuwa ugu tartamaya uguna wanaagsan shirkadaha XCMG.
Waxaan ku siinnaa qaybo farsamo XCMG, Caterpillar, Heli Forklift, Liugong, Lingong iyo shirkado kale oo caan ah oo ka shaqeeya mashiinada Shiinaha.
Qalabkeena taxanaha ah ee loo yaqaan 'XSL' oo ah ceelasha qodista ceelasha biyaha, XZ taxanaha jihada jihada jihada jihada ah iyo XR taxanaha qodista wareega ayaa loo dhoofiyaa in kabadan 30 wadan iyo gobolo ay kamid yihiin Waqooyiga Ameerika, Afrika, Bariga Dhexe, Kanada, Hindiya, Thailand, Malaysia, iyo Koonfur Bari Aasiya .
Xuzhou Dinghua Engineering Makiinado waxay leedahay moodooyin kala duwan oo ah hareeraha qodista jihada jihada ah, aaladaha qodista ceelasha biyaha, iyo aaladaha qodista wareega. Shirkaddu waxay leedahay injineero xirfadlayaal ah, shaqaale farsamoyaqaanno xirfad leh, adeegga xirfadleyda iibka kadib, waxayna leedahay u qalmidda liisanka wax soo saar ammaan ah, u qalmidda liisanka wax soo saarka qalabka gaarka ah ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha, iyo u qalmidda shaqaalaha amniga shirkadda. qofka iyo waaxda shaqaalaha maamulkeeda iyo hawlwadeenada safka hore dhamaantood waxay wataan shahaadooyin aqoonsi.
Hadafka iyo himilada shirkadda: macaamiisha udub dhexaad u ah, iskudhafka R&D, waxsoosaarka, iyo kheyraadka adeegga Abuur qiime u samee macaamiisha isla markaana ka caawi macaamiisha inay guul ka gaaraan awoodaha isku dhafan ee tayada la isku halleyn karo, teknoolojiyada hoggaamineysa, ilaalinta deegaanka iyo waxtarka Hal-abuurka leh ee loo buuxiyo baahiyaha dhabta ah iyo kuwa qiimaha leh. macaamiisha, kuna guuleysta taabashada iyo kalsoonida macaamiisha
Shirkaddu waxay noqon doontaa mid caalami ah, oo ay ka go'an tahay inay sii wado la kulanka baahida macaamiisha, iyo ka caawinta macaamiisha inay guuleystaan ​​ayaa aasaas u ah badbaadadeena iyo horumarinteena. Shirkadda ayaa diyaar u ah inay la shaqeyso dhammaan dhinacyada nolosha, dhammaan gobollada, dhammaan warshadaha, dhammaan shirkadaha, Macaamiisha shirkadda, saaxiibbada hore iyo kuwa cusub waxay dhisaan xiriir iskaashi oo ku saleysan sinnaanta iyo saaxiibtinimada, waxtarka labada dhinac iyo ku guuleysiga, aamin ah.
mashiinka qodista ceelka, Qalab Qodista Jihooyinka Horizontal, mashiinka qodista hdd, HDd rig,